Moto Giro Vintage မော်တော်ဆိုင်ကယ် | သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ် catalog, ရုပ်ပုံများ, ratings, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့် discusssions
Home → Moto Morini → Moto Giro Vintage Motorcycles
20 Jun 2015 | စာရေးသူ: dima | ဟာ Off comments အပေါ် Moto Giro Vintage မော်တော်ဆိုင်ကယ်
အဆိုပါ Moto-Giro ကယ်လီဖိုးနီးယားကွာလအနည်းငယ်ဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမဲ့ဒီအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းစတင်ရန်စုံလင်သောအချိန်ဖြစ်ပါသည်နဲ့ကျွန်မစတင်နိုင်ရန်အလွန်ကြီးစွာသောနေရာရှိသည်. တစ်ဦးက 1966 Gilera 106. It fits right in the rules and will be perfect.
Back in the 1960′s Sears Roebuck and Company sold just about everything…refridgerators, mattresses, tools, everybody’s ‘back to school’ clothes and yes, ဆိုင်ကယ်. The Sears catalog was the retail bible. What kid didn’t spend the entire month of November looking over the toy section, dad looking at tools and mom checking out all the Kenmore appliances?
ဒါပေမဲ့, think about this…the Honda CB350 is still the best selling motorcycle of all time.
Basically the 106 was looked at as simplyalittle commuter bike. An arm stretching 9hp and,atop speed of somewherealittle short of 60 တစ်နာရီမိုင်, it’s not something I would try riding onaSouthern California Freeway, it’s not even legal on most use Interstates. ဒါပေမဲ့, country backroads or around town, way too much fun.
So, I found this really nice little Sears / Gilera 106 on ebay and it looks likeareally good deal if you’re looking forasmall bike that needs little work. The ebay ad says it only has 604 miles but if you look at the odo it really has 6043 မိုင်, so…you may need to doalittle service on the bike. Parts aren’t all that difficult to find, there isagreat resource at Yahoo groups ‘Sears Motorcycleclub’.
’56 Gilera 150 အားကစား
Today, cruising through ebay I foundavery cool little Gilera that would be perfect for anyone wanting to rideaclassic small displacement motorbike. ဒါဟာင် 1956 Gilera 150 အားကစား. The bike has been sitting forawhile, ရှိပါတယ် 12,000 miles on the clock, it does run and runs pretty well according to the owner. The little 150cc motor puts outastaggering 8HP so don’t twist the throttle too hard or you’re going to find yourself flying intoacorneralot faster that you wanted….
2014 Moto Morini Rebello 1200- ပထမဦးစွာမျှော်ဆန်းစစ်ခြင်း- ဓာတ်ပုံများ
Moto Morini 250 T က
အမျိုးအစားMoto Morini »
အမျိုးအစား၏အခြားဆောင်းပါးများ "Moto Morini":
Moto Morini Kanguro နှင့် Dart – ဂန္ထဝင်မော်တော် ...
20.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် Moto Morini Kanguro နှင့် Dart – ဂန္ထဝင်မော်တော်ဆိုင်ကယ် Roadtest – RealClassic.co.uk
18.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် Moto Morini Unveils Granpasso, Scrambler, T5! – အိန္ဒိယကားဆိုင်ကယ်
16.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် 2014 Moto Morini Rebello 1200 ထိပ်တန်းမြန်နှုန်း @ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြန်လည်သုံးသပ်
The Moto Morini31/2 အားကစား – Classic Italia...
13.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် The Moto Morini31/2 အားကစား – ဂန္ထဝင်အီတလီမော်တော်ဆိုင်ကယ် – မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဂန္တဝင်
09.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် 2008 Moto Morini91/2 ထိပ်တန်းမြန်နှုန်း @ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြန်လည်သုံးသပ်
Moto Morini Scrambler 1200 ပထမဦးစွာမျှော် – Moto ...
05.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် Moto Morini Scrambler 1200 ပထမဦးစွာမျှော် – မော်တော်ဆိုင်ကယ်ယူအက်စ်အေ
04.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် 2010 Moto Morini Corsaro 1200 Veloce motorcycle review @ Top Speed
02.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် 2008 Moto Morini Corsaro Avio motorcycle review @ Top Speed
KTM 125 ပြိုင်ပွဲ Concept ကို ဆူဇူကီး Colleda CO စက်ဘီး Kawasaki ရင်ပြင်လေး ဟွန်ဒါ X4 အနိမျ့ Down Moto Guzzi 1000 Daytona Injection စမတ် eScooter ဟွန်ဒါ Goldwing ရှေ့ပြေးပုံစံ M1 Harley-Davidson XR 1200 ခံယူချက် သင်္ဘော MV Agusta 1100 Grand Prix Ducati Desmosedici GP11 Ducati Diavel ဟွန်ဒါ DN-01 တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအတွက် ဆူဇူကီး B-ဘုရင်ကနောက်ဆုံး prototype Brammo Enertia စက်ဘီး Kawasaki ER-6n Aprilia Mana 850 ဆူဇူကီး AN 650 တော်ဝင် Enfield Bullet 500 ဂန္ထဝင် အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic ဟွန်ဒါ DN-01 အလိုအလျောက်အားကစား Cruiser Concept ကို Ducati 60 Bajaj Discover ဆူဇူကီး B ကိုဘုရင်က Concept ကို မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအိပ်မက်ကလေးများ Dokitto